Ruzivo rweMupiro - Galveston County Chikafu Bhangi
Iwe unogona kupa zvipo mukuremekedza kana mundangariro yemumwe munhu.
Ona muenzaniso pazasi
ZveMundangariro / Rukudzo rwechitupa ndapota sanganisira ruzivo rweanogamuchira muchikamu chemashoko kana uchipa mupiro online. Kune hardcopy chitupa, sanganisira zita remupi uye kero yekutumira. Nezve digiti yedhijitari, sanganisira zita remupi uye kero yeemail.
Mibvunzo kana Kunetsekana, email Dora@galvestoncountyfoodbank.org
Zvipo zvemunhu mumwe nemumwe zvinogamuchirwa kuimba yedu yekuchengetera iri pa624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. Muvhuro - Chishanu 8am kusvika 3pm.
Zvipo zvekudya mapikicha anova mutengo unorambidzwa kana isu tichironga mashoma mapikicha. Tinokumbira kuti kana huwandu hwechikafu chakaunganidzwa chiri chidiki pane icho chinogona kukwana kumashure kwetiraki izere nemota yakakura, ndokumbira upinze kudura redu pa624 4th Ave N, Texas City, Muvhuro - Chishanu kubva na8am kusvika 3pm. (Ndokumbirawo ufonere pamberi pekusvitswa kuzivisa vashandi) Kuti uwane zvipo zvakakura, ndapota bata Julie Morreale pa409-945-4232.
Gadzira Chikafu uye Fund Dhiraivha
Dhawunirodha Ruzivo rwePaketi Pano
Donate kuna Kidz Pacz
Dhawunirodha Kidz Pacz Zvinhu Zvakawanda Zvinodiwa